Web Screen Scraping: Torohevitra Mpiasa avy amin'ny Semalt
Noho izany dia tsy tsara mihitsy ny mamela azy hiditra eo an-tànan'ny mpifaninana. Na izany aza, indraindray dia mety ho sarotra ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fanitsakitsahana ny fahitalavitra. Teknika izay nampiasaina nandritra ny taona maro mba handraisana ireo angona avy amin'ny tranonkala.
Ity fomba ity dia mametraka olana roa lehibe ho an'ny mafy orina. Voalohany, ny angon-drakitra dia azo ampiasaina mba hahazoana tombony amin'ny orinasa iray, angamba amin'ny fampihenana ny vidiny ary koa ny fahazoana fampahalalana momba ny vokatra. Ankoatra izany, raha mbola miorina tsara, ny teknika dia mety hanosika ny fampisehoana tranonkala iray ihany koa.
Amin'ny ankapobeny, ny fikorotanana ny efijery dia tetikasa izay noforonina tamin'ny fandaharam-pandefasan-kafatra tany am-piandohana roa taona lasa izay. Izany dia teknika programmatik izay mamoaka vaovao avy amin'ny sehatra izay natao voalohany indrindra mba hijerena ny olombelona. Ny fandaharana dia mendrika ho olona ary mamaky ny angon-drakitra, manangona fanazavana sarobidy ary manara-maso azy amin'ny fitehirizana azy.
Nivoatra ny teknika nandritra ny taona maro, indrindra tamin'ny famolavolana tranonkala..Nivoatra bebe kokoa aza ny fampiroboroboana ny efijery e-retail, ohatra, tranonkala fampitahana vidiny. Ireo tranonkala ireo dia mampiasa fandaharam-potoana izay mitsidika matetika ny finday malaza amin'ny finday mba hahazoana ny sarany farany ary koa ny fampahafantarana ny fampahafantarana momba ny vokatra na ny serivisy nomena. Io tahirin-kevitra io dia napetraka ao anaty tahirin-tserasera ary ampiasaina hanomezana fanamarinana mampitaha ny tontolon'ny e-retail.
Ny fanamafisana ny filalaovana fanatanjahantena dia manana fiantraikany ratsy eo amin'ny rafitra IT amin'ny orinasa iray, fa iray amin'ny ohatra hafa amin'ny fifamoivoizana tsy ilaina. Ny fanadihadihana vao haingana dia nanaporofo fa farafahakeliny 61% amin'ny fifamoivoizana no entin'ny bots. Ireo bots ireo dia mandany harena an-kitsim-po ary koa ny bandwidth natao ho an'ireo mpampiasa tranonkala tena izy izay mety hampitombo ny tahan'ny tsy fahampiana ho an'ny mpanjifa tena izy.
Nipoitra nandritra ny fotoana maharitra ny fanasitranana ny efijery. Na dia izany aza, vao haingana vao manomboka ny fihetsik'ireo niharam-boina tamin'ity fihetsika ity. Ny sasany dia nanambara ny tsy fahazoana ara-barotra tsy ara-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona raha mifanohitra kosa amin'ireo orinasam-pampandrosoana miaro ny tenany amin'ny filazana ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao.
Maro ireo tompon'ny tranonkala no nanoratra momba ny fampiasana rindrambaiko tao amin'ny tranonkalany izay mandràra ny fanararaotana mahery vaika. Mampalahelo fa tsy afaka mampihatra ireo politika ireo izy ireo, ka noho izany dia toa tsy ho ela ny olana.
Taona maro lasa izay, Ebay dia nampiditra API izay manome alalana mpitsabo hahazoana ny data. Na dia izany aza dia tsy manakana ny fanangonam-baovao maloto hampiasaina amin'ny tombontsoa amin'ny fifaninanana. Ny hany fiarovana tena izy dia azo raisina amin'ny fampiasana teknolojia izay afaka manakana ireo mpitsidika tsy vahiny amin'ny tranokalanao. Izany dia mamela ny tena mpampiasa hahatratra ny tranokalanao raha manakana ny mpitsikilo tsy hiteraka fahavoazana.
Ireo fomba hafa mahomby izay ahafahan'ny olona manohitra ny fampiasana ny rindrankajy dia amin'ny alalan'ny fampiasana teknika toy ny fahatsapana ny fahaleovantenan'ny IP, ny fanandramana ny loharanom-pahalalana IP, ny fanadihadiana momba ny fitondran-tena, ny valim-pifanampiana amin'ny fotoana mety, ary ny toeran'ny geo fampiharana Source .